Screen ebi akwụkwọ igwe na-arụ ọrụ - China Changzhou Plet Obibi
Screen ebi akwụkwọ igwe ọrụ
Screen ngwa nbipute na-arụ ọrụ ụkpụrụ iwebata -
1. ụgbọelu ewepụghị na ihuenyo-ebi akwụkwọ igwe ọrụ.
1 ụgbọelu na ihuenyo-ebi akwụkwọ igwe na-arụ ọrụ okirikiri mmemme. Na ikpe nke a ewepụghị halftone ihuenyo ụdị monochromatic ọkara akpaka ihuenyo ebi akwụkwọ igwe, onye nke ya ọrụ cycles bụ: nri → n'ọnọdu → adapụsị → ruo ink efere, azụ ka ink efere → ịkpụcha na ink strok → ebili ka ink efere → dobe azụ ink efere → inwego version → ink nloghachi strok → ntọhapụ n'ọnọdu → enweta.
Na-aga n'ihu okirikiri ọrụ, ka anya dị ka ọrụ ike na-ghọtara, oge ji site ọ bụla edinam kwesịrị dị ka obere ka o kwere omume, ka o wee na-ebelata ọ bụla na-arụ ọrụ okirikiri na-amụba ọrụ arụmọrụ.
3 imprinting akara. N'oge ebi akwụkwọ usoro, na ink efere na ihuenyo efere na-mbadamba na-etolite a na kọntaktị akara n'etiti ihuenyo efere na mkpụrụ, nke a na-akpọ onye na akara akara. Nke a akara bụ na nsọtụ nke squeegee na ọtụtụ edoghi etolite ebipụta n'elu. O siri ike imeta ezigbo nip n'ihi ebipụta ọrịa strok bụ ike usoro.
3 ihuenyo ebi akwụkwọ igwe na-arụ ọrụ. Ewere-ejikarị aka ekara ihuenyo ụgbọelu na ihuenyo-ebi akwụkwọ igwe dị ka ihe atụ, ndị na-arụ ọrụ ụkpụrụ nke ihuenyo ebi akwụkwọ igwe nwere ike kọwara dị ka ndị a: ike na-ebute site ná site na nnyefe usoro, nke mere na ink squeegee presses na ink na ihuenyo ebi akwụkwọ efere n'oge ije na-eme ka ndị na ihuenyo The efere na mkpụrụ ụdị ihe imprinting akara. Ebe ọ bụ na ihuenyo nwere esemokwu N1 na N2, a ike F2 na-eme na squeegee, na resilience akpata ihuenyo efere ghara imetu mkpụrụ ma e wezụga n'ihi na imprinting akara. The ink bụ N'okpuru mmetụta nke squeegee si apịpụta ike F1, na squeegee na-leaked si na-akpụ akpụ nip ka mkpụrụ site ntupu.
N'oge ebi akwụkwọ usoro, na ihuenyo-ebi akwụkwọ efere na squeegee na-akpali ikwu ọ bụla ọzọ, na-apịpụta ike F1 na resilience F2 na-kpaliri synchronously. N'okpuru ihe nke resilience, ihuenyo laghachi kpọtụrụ na mkpụrụ na oge izere kọntaktị. Abanyeworị unyi. Nke ahụ bụ, n'oge ebi akwụkwọ ọrịa strok, na ihuenyo na-nọgidere nkwarụ na rebounded.
Mgbe squeegee ahụ na unidirectional obibi, na squeegee na-detached si mkpụrụ ọnụ na ihuenyo efere. N'otu oge, ndị squeegee na-laghachiri ink mezue a-ebi akwụkwọ okirikiri. The anya n'etiti elu elu nke mkpụrụ na azụ elu nke ihuenyo efere mgbe ink laghachi na-ezo dị ka otu efere anya ma ọ bụ net anya, na n'ozuzu kwesịrị 2-5 mm. Mgbe aka-e biri ebi, ndị ọrụ na-na Usoro na proficiency imetụta guzobe nke nip ozugbo. Na omume, na ihuenyo na-ebi akwụkwọ na-akwakọba a ọtụtụ ihe ndị bara uru, nke nwere ike ikwu na na isi ihe isii, ya bụ, iji hụ na linearity, edo ọsọ, hà n'akuku, mgbali equalization, nnọpụiche, na verticality nke squeegee. Na ndị ọzọ okwu, squeegee kwesịrị ogologo n'ihu ini obibi, na ike maa jijiji ziri ezi na-ekpe; ọ pụghị ịbụ ọnụ n'ihu na mgbe ọ bụ ngwa ngwa, na ọ nwere ike na-adịghị ewe ma ọ bụ ngwa ngwa tupu mgbe ọ bụ ngwa ngwa; n'akuku nke nchepụta na ink efere kwesịrị nọ mgbe nile, na uche pụrụ iche na a ga-akwụ ụgwọ iji n'imeri tilt n'akuku. Nke nta nke nta dịkwuo nkịtị nsogbu; ebi akwụkwọ mgbali kwesịrị nọ edo; na-anya n'etiti squeegee na n'ime akụkụ nke ntupu etiti hà; na na-na ink efere na ede vetikal.
2. Ewepụghị ihuenyo n'elu-ebi akwụkwọ igwe ọrụ. Ewepụghị ihuenyo n'elu ihuenyo-ebi akwụkwọ na-ezo ka o kpuchie-ebi akwụkwọ na a ewepụghị na ihuenyo na a cylindrical ma ọ bụ conical n'elu. N'okpuru ụfọdụ ọnọdụ, ọ dịkwa ike igosi na ihuenyo-ebi akwụkwọ na curved ebupụta dị ka elliptical ebupụta, drum na-ebupụta, na aak ebupụta.
Akọrọ-net curved n'elu ihuenyo ebi akwụkwọ ígwè bụ a igwe na adopts a ewepụghị na ihuenyo efere ibipụta na curved n'elu.
Ụkpụrụ nke ewepụghị na ihuenyo ngwa nbipute na a curved n'elu a-ala amị b-axis ga na-akwado c-Mozis amị. N'oge obibi, na ewepụghị na ihuenyo-ebi akwụkwọ efere na mkpụrụ-eme, ndị squeegee bụ anyịnya. The ewepụghị na ihuenyo-ebi akwụkwọ efere clamped na ihuenyo etiti na ewepụghị na ihuenyo curved ihuenyo ebi akwụkwọ igwe Nkea na a edo ọsọ. The ebi akwụkwọ ihe onwunwe etinye na-akwado ngwaọrụ-agbagharị n'ihi na esemokwu nke ihuenyo efere. The akara ọsọ nke curved mkpụrụ na nip akara bụ otu ihe ahụ dị ka ndị na-agba nke ewepụghị na ihuenyo efere ghọta squeegee obibi akwụkwọ.
Theoretically, na embossing akara kwesịrị na ndị kasị elu busbar nke elu-ebi akwụkwọ mkpụrụ ikwado amụba anya-web n'akuku na huu ebi akwụkwọ mma. N'ihi na mma nke ukpụhọde, ndị squeegee n'ozuzu adopts ihe onu ire n'akuku nke 60 Celsius ± 15 °, na ọ na-achọrọ na-enwe ike ịgbanwe vetikal ogo na elu-na-ala akụkụ. Ukpụhọde vetikal bụ iji hụ na ihu akara adịghị amị mpụta mgbanwe mgbe ukpụhọde elu na ala, na mgbe nile aligns na kasị elu ụgbọ ala A; na squeegee na vetikal n'akuku nke 60 Celsius ± 15 ° a na-eji hụ na squeegee n'akuku a kpụrụ mgbe vetikal echichi. α. Na n'ezie ukpụhọde, iji hụ na ụgbọelu na ihuenyo-ebi akwụkwọ efere na n'elu-ebi akwụkwọ na ihe onwunwe na-detached na oge, na imprinting akara nwere ike ubé n'ihu. Karịsịa, mgbe mkpụrụ n'obosara bụ dịtụ ukwuu, ndị imprinting akara ga-dị n'ihu. The support ngwaọrụ maka curved ebi akwụkwọ bụ All iche iche nke pụrụ iche na ngwaọrụ na-haziri ma arụpụtara site ọrụ dị ka ngwaahịa chọrọ.
Cylindrical containers ma ọ bụ conical containers nwere ike e biri ebi na abụọ ụzọ abụọ nke ala biarin na curved elu, uwe-ụdị na cup-ụdị bushing biarin na a n'ogologo n'obosara ruru nke na-erughị 1.5, na mgbanwe oghere containers nwere ike na-akwado site inflatable ngwaọrụ. The ellipse bụ mkpokọta a akụkụ nke a cylindrical elu na ike ga-akwado site na a cylindrical Mozis.
Ụkpụrụ nke ibi akwụkwọ n'elu nke cone bụ ihu ọma ahụ dị ka ụkpụrụ nke ibi akwụkwọ n'elu nke cylinder. Ihe dị iche bụ na graphic udi nke ihuenyo ebi akwụkwọ efere na ije ụdị nke ihuenyo ebi akwụkwọ efere. Mgbe na-eme na ihuenyo-ebi akwụkwọ efere eji maka n'elu-ebi akwụkwọ nke cone, ọ dị mkpa na-akpa-ise na eketịbe echiche nke elu nke cone, na chọta n'etiti ndi oru dabeere na eketịbe echiche, wee họrọ ihe kwesịrị ekwesị etiti ime na ihuenyo efere.
On a version of efgh na ike kpamkpam ịnabata ofufe ekara abed, a na-ebi akwụkwọ efere sụgharịa ka onye ofufe udi na-emepụta. Idozi nri-n'akuku mmanya na version efgh ma wụnye o-axis ka a na-akwado ekara version. Mgbe ahụ, dị ka na-ebi akwụkwọ nke elu nke cylinder, anọ rollers na-eji na-akwado mkpụrụ n'okpuru efere, agụba bụ ofu, na efere na-kpaliri ke a na-akwado udi, na elu nke cone efere nwere ike e biri ebi site na ịpị agụba. N'oge obibi, na conical obibi na-ada n'ime akara na kọntaktị na ihuenyo-ebi akwụkwọ efere n'okpuru a ụfọdụ squeegee mgbali; mgbe na ihuenyo-ebi akwụkwọ efere akpali ịgbasapụ gburugburu axis nke onye ofufe ekara development ịbịaru, na-ebi akwụkwọ na ihe onwunwe na-agba gburugburu synchronously na-akwado ngwaọrụ. Sports; ink n'okpuru mgbali nke squeegee, Agbaghara na elu nke mkpụrụ mezue obibi akwụkwọ.